Abuuritaanka Shabakad Bulsheed - Shabakada Fanaaniinta Colts | Martech Zone
Axad, Oktoobar 15, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Saaxiibkeyga wanaagsan, Pat Coyle wuxuu dib ugu calaamadeeyay boggiisa Suuqgeynta Isboortiga 2.0 wuxuuna hadda wax ka qorayaa isbeddelka Shabakadda Fan Fan. Tani waa Duufaan Hufan (hab wanaagsan)… dhagaystayaal daacad ah oo maxaabiis ah (oo aan la xadi karin), marin toos ah oo loogu talagalay iyaga si ay ula wadaagaan daacadnimadooda iyo jacaylka ay u qabaan koox weyn, iyo tikniyoolajiyadda ay ku dhici karto. Pat sidoo kale waa xirfad yaqaan erey-yaqaan sidaa darteed balooggiisa waa mid madadaalo badan. Qisadiisa ku saabsan daahfurkaan waa wax ay tahay inaadan ka maqnaan!
Waa kan shaashadda Shabakadda Fan Fan (oo dhowaan laga qoray at Mashable).
Dadaalkani waa guul-guul-guul Colts. Indianapolis Colts waa “Kooxda Mareykanka”, waa kooxda ugu taageerayaasha badan dalka. Qeyb kasta oo kooxda ka mid ah waa wax layaableh - Jim Irsay wuxuu ku yimid isagu sidii milkiile cajiib ah, isagoo helay tayada ugu fiican dalka una ogolaaday inay shaqeeyaan. “Bill Polian waa Madaxweynaha kooxda Indianapolis Colts NFL. Wuxuu ku guuleystay abaalmarinta NFL ee Fulinta Sannadka 5 jeer (1988, 1991, 1995, 1996, iyo 1999). Polian wuxuu ahaa Maamulaha Guud ee Biilasha Buffalo sanadihii 1986 - 1993, wuxuu dhisayay koox ka qeyb qaadatay afar toosan oo Super Bowls ah (wuxuu halkaas u joogay 3 ka mid ah). Polian wuxuu ahaa Maareeyaha Guud ee balaarinta Carolina Panthers ilaa uu u dhaqaaqay Colts-kii 1997. ” - Wikipedia.
Tony Dungy waa Tababaraha Colts. Tababare Dungy waa tababare cajiib ah iyo qof. “Dungy waa nin cibaado badan oo diinta kiristaanka ah wuxuuna mar uun xirfadiisa tababarenimo ka fiirsaday inuu ka tago kubada cagta una aado wasaarada xabsiga. Intii uu ku guda jiray xirfadiisa, wuxuu ku sii jiray ku biirista ururada u adeega bulshada. ” - Wikipedia.
Dabcan ciyaartooyda arintaan sameeya… Payton Manning, Jeff Saturday, Marvin Harrison, Dwight Freeney, Cato June really Runtii ma jiro hal cayaaryahan oo banaanka soo istaaga (in kastoo saxaafadu waqti badan ku bixiso Payton). Runtii waa koox halkii ay ka ahaan lahayd koox fara badan oo xiddigihii isku dayay inay is muujiyaan. Kooxda sidoo kale waa la ixtiraamaa, marar dhif ah ayaad ka heli doontaa ciyaartoy Colts warka wixii kale oo aan ahayn wanaag… dhif iyo naadir ku ah cayaaraha xirfadeed. Ka eeg qaybta Beesha ee Colts.com si loo arko waxqabadka ay Colts u qabtaan bulshada. Way fiicantahay in la arko. Halkan Indy, kooxdeena NBA-da ayaa goor dhaweyd ku lug yeelatay waji gabax kale… marka Colts waa ka xarunta fiiro gaar ah iyo ixtiraam. Waan rumaysanahay!
Sooyaalkii Pat ee Suuq Guru waa ku habboon yahay inuu tan hogaamiyo. Waxaan ku raaxeystay la shaqeynta Pat iyo Darrin Gray shirkad la yiraahdo Si toos ah halkaas oo aan ku fulinay ololeyn suuq-geyn iyo xayeysiin shirkado dhowr ah oo halkan ku yaal Indy (oo ay ku jiraan Colts). Markii Colts uu wacay Pat waqti-buuxa ah si uu uga caawiyo inay xiriir wanaagsan la yeeshaan taageerayaasha iyo kuwa heysta tikidhada xilli-ciyaareedka… taasi waxay ahayd fursad uusan dhaafi karin! Weli waan lahadlaa Pat usbuuc kasta waxaanan kaqeyb qaadanaa Naadiga Buugaagta Indianapolis ee maxalliga ah halkaas oo aan ka wada hadalno oo aan ku hirgalino fikradaha buugaagtii ugu dambeysay uguna weyneyd ganacsiga ee waddada. Waxaan ku soo biirnay qaar ka mid ah maskaxda sare ee Suuqgeynta halkan Indianapolis wax badan ayaan ka bartay soo-gaadhista dadkan hibada leh.
Fiiri Suuqgeynta Isboortiga 2.0 si aad u daawato isbedelka Shabakaddan Bulshada. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh!
Windows Vista waxay bedeshaa Ruqsadda
Oktoobar 16, 2006 at 6:27 AM
Marwalba waan jeclaa awoodahaaga suuqgeynta iyo tikniyoolajiyadda, laakiin hadda waxaan arkayaa inaad baaqatay wicitaankaagii. Waa inaad aniga iigu jirtaa PR !!
Waad ku mahadsantahay ereyada naxariista leh iyo inaad dadka u ogeysiiso Shabakadda Fan Fan. Waxaan mashquul ku nahay diyaarinta goobta bilowga - Ma sugi karo inaan bilaabo tijaabada!
Hal shay waa inaan tilmaamaa, si kastaba ha noqotee. Kooxda Colts ayaa laga yaabaa inay yeeshaan taageerayaasha ugu dhaqsaha badan ee ka soo baxa kooxaha NFL, laakiin ma lihin taageerayaasha ugu badan, mise waxaan nahay "Kooxda Mareykanka." Labadaas kala sooc ayaa wali taga Dallas Cowboys. Sumaddaasi waxay bilaabatay inay xoog yeelato 1970-yadii waxayna sii wadaysaa adkeysiga.
Rajadaydu waxay tahay in hal maalin iyada oo loo marayo adeegsiga xariifnimada suuq geynta iyo tikniyoolajiyadda - iyo qaddarka dhawaqa ah ee isu dhawaanshaha macaamiisha - runtii waxaan u kici karnaa xagga sare.
Oktoobar 16, 2006 at 8:11 AM
Laakiin Cowboys way nuugaan.
Agoosto 22, 2007 saacaddu markay ahayd 6:01 PM
Waxaa xiiso ii leh aniga oo aanan arkin baraha xiriirka bulshada ee isboortiga oo badan khadadka facebook iwm iwm.… Waxaa jiray boggag kale oo badan oo laxiriira madadaalada. Xilligan waxaan ka shaqeynayaa barta xiriirka bulshada ee loogu talagalay Filim Jecel. Xaqiiqdii waxaa la sii daayay wax ka yar hal bil ka hor. Laba wada-hawlgalayaal ganacsi iyo aniga, waxaan belive abuuray goob aad u adag oo u oggolaanaysa isticmaale aad u badan marka la eego qiimeynta dib u eegista filimka iyo tan ugu muhiimsan liistadooda filimka u sarreeya (dhammaantoodna dib loogu laaban karo jiidis iyo hoos u dhac). Ahaanshaha bil uun ama sidaa u weyn, waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysan doonno si la mid ah sida shabakadani leedahay - laakiin PR iyo hadalka afku waa qaybaha ugu muhiimsan. Muuqaal wanaagsan waxaanan rajaynayaa inaan kugu arko dhamaantiina filmcrave.com sidoo kale.